Warar - Hordhac iyo faa iidooyin qashin qod taxane XCMG DK ah
Hordhac iyo faa iidooyin qodayaasha taxanaha XCMG DK
Iyada oo ah shirkad hormuud u ah warshadaha mashiinnada dhismaha ee Shiinaha, XCMG waxay soo bandhigtay "koox bir ah" oo xoog badan oo xoog badan oo ka kooban qashin qubka XCMG si ay u muujiyaan qaabka waddan weyn.
Si loo buuxiyo "xaaladaha dhismaha ugu qalafsan iyo shuruudaha dalabyada ugu dhameystiran", XCMG qodista, iyadoo lagu saleynayo waxyaabaha jira ee hadda jira-D qodayaasha taxanaha ah, waxay sameysaa baaritaan qoto dheer si loo fahmo xaaladaha dhismaha macdanta iyo baahida macaamiisha, iyo Xogta weyn Falanqaynta qotomayaasha ku hawlan xaaladaha culus ee shaqada waxay si guul leh u abuurtay taxane taxane ah oo DK ah oo ku habboon xaaladaha shaqada culus sida miinada dhismaha.
Isticmaalka shidaalka ee mashiinka oo dhan waxaa hoos u dhigay in kabadan 5%, gaar ahaan xaalada burburka. Isticmaalka shidaalka waxaa hoos u dhacay 20%; waxtarka macdanta waxaa lagu kordhiyay 10%, xooggana qodista waxaa lagu kordhiyay 11%; baaldiga dhagaxa cusub waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo ilkaha baaldiga iyo ilaalinta bushimaha, Saxanka xoojinta Side, u adkeysiga saameynta wanaagsan iyo iska caabbinta xirmada; nolosha guud ee qalabka shaqada waxaa lagu kordhiyay 20%; iyada oo awood u leh la qabsiga 50 ° jawiga heerkulka sare. Soosaaradan taxanaha ah ee 'DK' waxaa ka mid ah toddobo shey oo cusub sida 15 tan, 22 tan, 24 tan, iwm., Oo leh saddexda aag ee hormoodka ah ee isku halaynta, keydinta tamarta iyo waxtarka leh, iyo kuwa awoodda u leh "la qabsiga badan ee labada xaaladood ee shaqo ee ugu waaweyn" burburinta iyo macdanta Faa'iidada waxaa lagu magacaabi karaa "cabir cusub" oo ku saabsan mashiinnada qodista macdanta ee Shiinaha. Xuzhou Wuzhijia Makiinado, inta badan waxay bixisaa noocyo kala duwan oo iibinta qodista iyo adeegyada dayactirka qaybaha.